Daawo Sawirro muujinaaya mas’uuliyad darada Maamulka... | POHSOMEV.COM
Daawo Sawirro muujinaaya mas’uuliyad darada Maamulka...
posted by admin on Sun, 02/18/2018 - 22:32
Muqdisho (- Online)-Waxaa sii kordhaaya nadaafad daro ka taagan Qaar ka mid ah Wadooyinka ku yaalla Magaalada Muqdisho, kuwaa oo eersanaaya dadaal la'aan ka jirta dhanka maamulka Gobolka Banaadir.
Waddooyinka ugu badan ee magaalada Muqdisho iyo goobaha lagu ganacsado sida Suuqa Bakaaraha ayaa Saldhig u noqday biyo cagaartay oo ka dhashay qashinka iyo biyaha ay Maqaayadaha soo qubaan.
Biyaha iyo Qashinka ugu dan ayaa iminka buux dhaafiyay Suuqa Bakaaraha oo hoostagta Degmada Howlwadaag gaar ahaan Wadada Masjidka Xareed ee Aada isgoyska Baar Ubax ayey jarta wasaqda ka dhalatay Nadaafad Darada.
Waddooyinka aan kor kusoo xusnay ayaa fadhiisi u noqday biyo cagaartay oo midabkooda isbedelay, islamarkaana waxa ay waddaasi noqotay mid lagu soo guro qashin badan.
Wadda Xareed ayaa muhiim ah u ah Isku socodka dadka iyo Gaadiidka, waxa ayna isku xirtaa waddooyin badan oo halboole ah.
Qashinka iyo Biyaha fadhiya waddooyinka Gobolka Banaadir ayaa qeyb ka ah mas'uuliyad darada heysata maamulka Gobolka Banaadir oo iyagu qaada dhaqaalaha ugu badan ee ku jira gacanta shacabka.
Maamulka Gobolka Banaadir ayaa saldhig u noqonaaya xil kasnimo la'aan waxaana xusid mudan in waddooyin kabadan 13 ay yihiin kuwo ay jareen wasaq iyo biyo sababay cuduro kala duwan.
Sidoo kale, waxaa jajaban waddooyin aad u farabadan oo ay shacabku ku bixiyaan lacago canshuur ah, hase ahaatee waxa ay dadku is weydiinayaan halka lagu bixiyo lacagaha canshuurta marba haddii uu arinku sidaa yahay.
Qaar ka mid ah shacabka ayaa sheegay in waddaasi horay lagu sameeyay dayactir, islamarkaana la saaray waddo laami Balse nasiib daro ay weyday maamul daryeela, halka maamulka hadda jira uusan iska xil saarin mas'uuliyada ka saran nadaafada.
Maamulka Gobolka Banaadir ee uu Hoggaamiyo Eng. Yariisow ayaa ka badan'la xaflado iyo xarig ka jarista xarumo Degmooyin oo la dayactiray
Inta badan maamulada degmooyinka Magaalada Muqdisho ayaan iska xilsaarin ilaalinta Nadaafadda Wadooyinka dib u dayactirka lagu sameeyay.